နည်းပညာများ Archives - Page2of3-
Apple မှ iOS 14 ကို iOS User များအတွက် Offical ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ ။ iOS User များအတွက် iOS 14 မှာအကောင်းဆုံး Function တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။...
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ iOS 14 နဲ့အတူ iPadOS 14, watchOS7နဲ့ tvOS 14 တို့ကို Release လုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်လို့Settings > General > Software Update...
(1) Apple Watch Series6(2) Apple Watch SE (3) iPad 8th generation (4) iPad Air (5) Fitness+ (6) Apple...
Apple Watch Series6Vs SE Vs Series5တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
Apple ရဲ့ စက်တင်ဘာလမှာ ပြုလုပ်မယ့် Apple Event အမည်ရ ပွဲတစ်ပွဲကတော့ မနေ့ကပဲ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အချက်နှစ်ချက်က Apple Watch Series6နဲ့ Apple...
iPhone သုံးစွဲသူ အများစု သတိမထားမိသော မှော်ဆန်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
( 1 ) iPhone ကို လှုပ်ယမ်းပြီး Undo ပြုလုပ်ခြင်း စာရိုက်တဲ့အခါ ( သို့မဟုတ် ) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာ Texts တို့, Emojis တို့ အစရှိသည့်တို့ ထည့်သွင်းပြီးကာမှ မနှစ်သက်လို့...
10 months ago Myat Thura
ယခုချိန်အထိ iPhone 12 Series တွေမှာ 120 HZ Display နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလာဟာလသတင်းတွေ ထွက်နေဆဲပါ ။သို့သော် High refresh rate Display ကို စောင့်မျှော်နေသူအားလုံးအတွက် Industry Insider...
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေကြတဲ့ Apple Product တွေ အားလုံးကို စွမ်းအင်ချွေတာပြီး၊ ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်အောင် စနစ်တကျ စီမံ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကြာရှည် အသုံးခံခြင်း Device တွေကို Performance ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ...
၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ဝက်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက Smartch Watch ဝယ်လိုအားရဲ့ 51.4 % ကို Apple ရဲ့ Smart Watch များက နေရာယူထားကြောင်း Counterpoint ရဲ့ သုတေသန အစီရင်ခံစာအရ...
AirPods2နဲ့ AirPods Pro ဘာတွေကွာသွားလဲ ?
Difference between AirPods2& AirPods Pro AirPods တွေဈေးကျသွားတော့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် AirPods2နဲ့ AirPods Pro ရဲ့ကွာခြားချက်‌လေးတွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီနှစ်ခုမှာ အဓိကကွာသွားတာက Design, Control တွေရယ်...
iPhone ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင် ဘယ်လို စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ထားလဲ?
10 months ago Kaung Myat Phone Kyaw
အကောင်းဆုံး Product တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ အခြားတစ်ဘက်မှာ ထိခိုက်မှု မရှိအောင်လည်း Apple က အထူးဂရုစိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်တိုင်းမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝ မထိခိုက်အောင် Apple က နည်းလမ်းအသစ်တွေ အမြဲ...